Ngowama-2020 uMvelisi oBalaseleyo weZinto eziThunyelwayo, iFektha yeeNcwadi eziThunyelwayo | Unamandla
Sesona sivelisi sinobuchule zaidi sithengisa ngaphezulu kwe-10000 zeebhegi zomoya.
BALUTHA INDLELA YOKUZINIKELA NGAMANDLA
Amathoyizi anamandla liqabane lakho elifanelekileyo nokuba ulindele ukuba athathe indawo yomgodi wakho kwipropathi ye-trampoline park okanye kwindawo yokuzivocavoca ngee-airbags, okanye ufuna i-frebags zomoya ezinkulu ukuze uzuze iirekhodi ezaphukileyo.
Amathoyizi anamandla liqabane lakho elilungileyo nokuba ujonge ukuthatha indawo yomgodi wakho wethrafiki kwipaki yakho okanye kwindawo yokuzivocavoca ngesingxobo somoya, okanye ujonge ukwenza iirekhodi eziqhekezayo zibe yingxowa enkulu yomoya. Ngaba ufuna ukufumana ukonwaba ngakumbi kwikhosi yakho ephezulu, okanye unalo iqonga esele likho okanye indawo eyongezelelweyo? Ngaba ujonge indawo entsha oza kuyongeza kwi-park yakho yokukunceda ukuba wenze umvuzo kunye nokuguqula iphothifoliyo yakho yemisebenzi? I-Stunt Airbag lukhetho olufanelekileyo!
I-bouncer yangokwezifiso e-inflatable ye-Toys ezinamandla
Ngama-2020 eyona ndawo yokutsiba i-airbag ye-airbag ngokuthe ngqo yokubonelela ngexabiso elifanelekileyo lokunyuka kwe-bouncer kwikrisimesi ngexabiso lokhuphiswano, nxibelelana nomzi-mveliso onamandla.
Inamandla i-2020 yeBmx Airbag eyaziwa kakhulu, iRegging yeBmx yeLmx yeLanding
I-2020 yokhuphiswano oluqhelekileyo noludumileyo lwesiko lebhombu yomoya, iibhegi zomoya bmx zokwenza umjikelo wokungenisa, isakhelo samahhala se-3d, moq: 1itter, ukuhanjiswa ngokukhawuleza, ixesha elifutshane lokukhokela, qhakamshelana nathi ngoku
Imidlalo eSebenzayo eChaphazelekayo, Umatshini oSimahla weMidlalo ye-Airbag eyi-5 enamandla anamandla
Umzi-mveliso wamathoyizi onamandla anetoyitoyithi inikezela ngemidlalo enesantya shushu, iinkonzo zomoya zokwenza kube lula kubathengi behlabathi, iinkcukacha ezithe vetshe malunga neMidlalo ezinamandla ezinobungozi, buza kwi-intanethi ngoku.
Isikhuseli seNqwelo moya esinamandla esijongene nabakhweli beBMX
Ngaba ujonge i-airbag yokufika? Nxibelelana nomzi-mveliso onamandla wokungena kwixabiso elinamandla, 2020 umenzi wetoyi odumileyo onikezela ngobuchule bokungenisa iibhegi zomoya, uyilo simahla, amava omkhweli.
Singomnye wabenzi bokuqala beebhegi zomoya ezinobuchwephesha beRAmaqela e-D.
Sincamathisela ukubaluleka okukhulu kuphuhliso lwemveliso kunye nokuvavanywa. Ukuqhubela phambili ngokukhuselekileyo kukusukela kwethu. Amathoyizi anamandla athengise ngaphezulu kwe-10000 yeebhokhwe zomoya ukuza kuthi ga ngoku. Sisoloko sinika ezona mveliso zintle kunye nenkonzo efanelekileyo kubathengi kwihlabathi liphela.
Ngenxa yokwakhiwa kwayo okuqinileyo kunye nokukhanya, i-BMX Airbag iye yaba yeyona airbag ithandwayo kwiindawo zokuchithela i-ski, kwiipakethi ze skate nakwiipaki zebhayisikile. Isimbo soMoya soqeqesho! Lo mkhondo woMoya usebenza ngokugqibeleleyo kuwo wonke umthambo wokuzivocavoca kunye nokudlula kokuhamba. Ukusuka kwi-gymnastics ukuya kwi-parkour, ukusuka kwiklasi ye-kung-fu ukuya kwi-physiotherapy, sisiseko esihle semidlalo eyahlukeneyo kunye neendlela zoqeqesho.
Imveliso yethu ikwinqanaba eliphezulu kakhulu. Sinikezela ngamaxabiso akhuphisanayo kwaye anengqondo. Sibaleka kakhulu. Sisoloko sikholelwa ukuba umgangatho weprimiyamu, inkonzo egqwesileyo, kunye nexabiso lokukhuphisana kuphela kwendlela yokuhlola imakethi enkulu. Sinikela ingqalelo kwiinkcukacha zoyilo, ukuvelisa, uku-odola nokuhambisa.
Siphambi kwethu phambili ekuveliseni iibars zomoya.
Amathoyizi anamandla Co, Ltd. ngumenzi wexabiso lerhafu. Sixhotyiswe ngokufanelekileyo ngezixhobo zokuvavanya kunye namandla aqinileyo obuchwephesha. Njengomnye wabakhiqizi abahamba phambili abahamba ngamaxabiso eTshayina, sizuze iwonga lomgangatho kunye nenkonzo kwintengiso yehlabathi, ngakumbi eYurophu, e-USA, e-Australia, nakwi-Middle East.
Iipaneli zethu zePotifoliyo Gxuma i-Airbag, I-Bumper Ball, Intente e-inflatable, Ibala leSoka, iiBhola, iiMidlalo eziDlalayo, iSlide, i-Combo, imiqobo, Imidlalo yemidlalo, Amanzi eThaneliyo, uMfuziselo oDibeneyo, i-Arch, ikhathuni yekrisimesi, i-PVC Balloon, uMdaniso woMoya, uRoller Iibhola kunye neemveliso ezinokwenzeka ezinokutsha.